Confetissimo - haweenka blog - Dharka, qaabka, quruxda, xiriirka, guriga
U gee tusmada
Confetissimo - blogka haweenka
Qurxinta, qaabka, quruxda, xiriirka, guriga
Quruxda iyo qaabka
Iyada oo la xidho
Noocyada tirada dumarka
Timaha iyo timaha
Naqshada Qolka Nolosha
Naqshad qolka jiifka ah
Manicure cagaaran oo qurxoon 2019-2020 - sawirro, warar, fikradaha naqshadeynta
Mawduuca: Manicure iyo pedicure
Maanta, naqshadeynta ciddiyaha ayaa lagu samayn karaa midab kasta, waxa ugu weyn ayaa ah in lagu daro daacadnimada sawirkaaga. Si kastaba ha noqotee, stylists sannad kasta waxay muujiyaan tiro ka mid ah midabada ugu caansan, oo si habboon u dhameystiraya ...
Si buuxda u akhri
Xilliga dayrta qurxiyo 2019 - isbeddellada, fikradaha moodada iyo sawirada 109
Is qurxinta, sida dharka, waa waqtigii isbedelka. Farsamada Guga 2019 waxay soo jeedineysaa lahjadaha dhalaalaya iyo khadadka joomikada. Gabar kasta, oo qorsheynaysa muuqaalkeeda, waa inay xaqiiqdi ...
Fikradaha hal-abuurka ah ee manicure 2019-2020 ee sawirka
Warshadaha moodada ma istaagaan oo si daallan ayay uga farxiyaan fashionistas leh xalka cusub iyo fikradaha ku saabsan sida ay u muuqdaan xitaa qurux badan oo fiican. Maalin kasta, aruurinta hogaamiyaasha horumarsan ayaa la buuxiyaa ...
Sida loo qurxiyo derbi - fikradaha iyo xalalka asalka ah ee sawirka
Mawduuca: Naqshadeynta gudaha
Mararka qaar marka dayactirka la dhammeeyo ka dib, dareenka ah dhammaystir la'aan ayaa weli jirta. Sababta tani waxay noqon kartaa derbi madhan oo aan siin muuqaal buuxa oo gudaha ah. Xaaladdan oo kale, habab kala duwan oo qurxinta qolka ayaa badbaadinaya ....
Dharka moodhalan ee dayrta-jiilaalka 2019-2020: isbeddello isbadal leh, qaab, muuqaallo
Mawduuca: Habka dharka
Sanad kasta, iyadoo ay ku soo beegmayso xilli, dhammaan jinsi kasta oo caddaalad ah, xitaa miisaaniyadda ugu yar, ayaa raadinaya qaabab aad ku cusbooneyso dharkaaga wax cusub. Dharka moodhalan ee dayrta-2019-2020 ...
Faransiis leh ubaxyo - noocyo kala duwan oo naqshadeyn ah iyo sawir 100 ah
Qalimaan iyo qurux soo jiidasho leh oo gabadha ah ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan ee muuqaal qurux badan oo qurux badan. Dad badan oo cilminafsiyeedka cilmi-nafsiga ah ayaa ku doodaya in marka lala hadlayo qof, marka ugu horreysa, ann ...
Jaakada madow ee ciddiyaha - fikradaha naqshadeynta iyo sawirada 100
Jaakad madow oo la yaab leh oo qarsoodi ah ayaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aad u mooddo qurxiyo casri ah. Midabkani wuxuu caan ku noqday waxqabadka manicure Faransiis. Naqshad noocan oo kale ah marigolds ma aha in lagu sameeyo qaab caadi ah….
Dabaqa geeska ee qolka fadhiga - fikradaha sawirka
Saqafka dusha sare ee qolka fadhiga waa shey muhiim u ah guriga. Isticmaalidda, waxaad si fudud u xallin kartaa dhibaatada aagagga, wuxuu dhammeystiri doonaa qabanqaabada dhismayaasha, si fiican u dhammaystirayo gudaha, waxay bixisaa sariir dheeri ah….
Beige french - fikradaha manicure leh qurxinta iyo sawirka 100
Manicure Faransiis ee naqshadeynta beige waa nooc aad u fiican oo ah farshaxanka ciddiyaha, kaas oo u adeegta sidii xalka ugu fiican ee munaasabadaha oo dhan oo loo nadiifiyey noocyo kala duwan oo dharka ah. Midabkani waa kan ugu ...
Dharka Waddada - Dayrta 2019
Muuqaalka jidadka ayaa ah mid ka mid ah qaababka ugu xiisaha badan ee dharka loogu talagalay dharka casriga ah ee loo yaqaan 'fashionistas' deyrta ee sanadka 2019. Waa wax ficil ah, moodada ah oo ku habboon nolol maalmeedka, markaa kuwa aan ...
Naqshadeynta farshaxanka Faransiiska ee cawlan - fikradaha farshaxanka ciddiyaha
Dhamaan hooska cawlada waxaa loo qaddariyo inay yihiin kuwa caam ah, madaama aysan lahayn xadidan xadidan. Dhamaan fanaaniinta caanka ah ee adduunka oo dhan ayaa ku soo biiraa figradan Sida muuqata mala awaalkan oo ka tarjumaya ...
Xilliga dayrta 2019: dharka, kabaha, waxyaabaha kale (235 sawirro moodada moodada leh)
Naqshadeeyayaasha ayaa horeyba u awood badnaa isla markaana soo bandhigaya uruurinta dayrta, iyada oo lagu saleynayo kuwaas oo loo abuuray sawirro moodada moodada leh. Maqaalkan waxaan si faahfaahsan ku eegi doonnaa isbeddellada moodooyinka ugu waaweyn ee dayrta 2019, oo aan kuu sheegi doonnaa ...
Sida loo sameeyo qolka fadhiga midabyo madow - figradaha ugu fiican iyo sawirrada
Mawduuca: Naqshada Qolka Nolosha
Waxay muddo dheer soo jirtey in midabka mugdiga ah ee gudaha uu xiriir la leeyahay wax cabsi leh oo xitaa liidata. Dadka qaar waxay aamminsan yihiin in hadhyadaani ay qarinayaan meel bannaan, wax xukumaan oo xakameeyaan. Xaqiiqda ...
Manicure xilliga fasaxa - fikradaha sawirka 100
Tagista fasaxa, gabadh kasta waxay isku dayeysaa inay ka fikirto faahfaahin kasta. Xaqiiqdii, waqtigan aad rabto inaad u ekaato gaar ahaan qurux badan oo aadan ka walwalin wax. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad horay uga taxadaraan ...
Iftiinka jikada - sheyga doorashada iyo fikradaha naqshadeynta
Si loo abuuro kuleyl iyo raaxeysiga jikada waxay u baahan tahay adeegsi ili iftiin gooni ah qeyb kasta oo qolka ka mid ah. Iyada oo ku xidhan qaabka, waxaa lagama maarmaan ah in la wajaho rakibidda aaladaha nalalka. Marka ...
Manicure oo furiinka - 100 sawir naqshadeeye
Dahabka Monochrome ama sawirro caadi ah ayaa durba caajisay gabdho badan. Si loo kala duwo manicure caadiga ah, waxaan kugula talineynaa inaad fiiro gaar ah u yeelatid naqshadda furiinka. Waxay u egtahay mid asal ah, aan caadi ahayn. Ka sokow ...
Pantone: midabada xilliga dayrta-xilliga qaboobaha 2019-2020
Mawduuca: Midabka dharka
Machadka Pantone wuxuu raadinayaa midabada ugu caansan uguna wanaagsan ee sanadka, isagoo falanqeynaya bandhigyada, qaabka wadada iyo jawiga internetka. Qayb muhiim ah waa shaqada ku saabsan magac-qorista sii-haynta. Laakiin ka sokow "boqorka xilli", ...
Joodarka adeegga cas: 100 fikradaha farshaxanka ugu fiican ee sawirka
Naqshadaynta ciddiyaha casriga ahi weligeed ma joogsato inay la yaabto oo ay ku raaxeyso fashionistas leh xalka dhalaalaya oo soo jiidasho leh, dhammaan inta lagu jiro xulashooyin xiiso leh oo mararka qaarkood aan caadi ahayn. Waxaa ka mid ah noocyo badan oo nashqadeyn ciddiyaha ah oo ...
Wallpaper qolka fadhiga: Natiijooyinka doorashada iyo warar ku saabsan sawirada
Qolka fadhiga ee guri kasta waa goob ay reerka oo dhami isugu yimaadaan oo ay salaantaan martida. Sidaa darteed, gudaha qolka waa inuu lahaadaa isgaarsiin iyo waqti raaxo leh. Ka caawi abuurida raaxo
Maalinta timaha timaha loogu talagalay timaha dhexdhexaadka ah: xulashada qaababka qaabeynta sawirka
Mawduuca: Timaha iyo timaha
Marka la eego gabadha quruxda badan, muuqaalkeeda ayaa si gaar ah loo arkaa, gaar ahaan timaheeda. Taasi waa sababta marwada kasta ugu bixiso waqtiga ugu badan gelinta. Dhab ahaantii waa midka ugu badan ...
Manicure la daabacay: fursadaha naqshadeynta iyo sawirka 100
Qurux badan, farsamo xardhan waa waxa gabar kasta ay rajeynayso. Sababo la xiriira noocyada kala duwan ee naqshadeynta, waxaad kala kulmi kartaa dhibaatooyin qaarkood habka xulashada. Ka dib oo dhan, waxaa muhiim ah in qaabeynta ciddiyaha ...
Tartanka haweenka ee ugu quruxda badan oo kordhay xagaagan
Dharka moodada xagaaga quruxsan iyo quruxda badan kaliya maahan dharka fudud iyo dharka hoosta. Qaansooyinka leh shaati-gacmeedka iyo shaati-gacmeedka oo ay weheliso kuwa dhalaalaya iyo kuwa xiisaha leh ayaa la tartami doona ...
Kudhin oo ay weheliso qolka fadhiga: fikradaha naqshadaynta, khibrad iyo iid
Waqti aan sidaa u sii fogeyn, qaab jikada furan ayaa soo if baxay. Badanaa, xulashadan waxaa laga heli karaa guriga istuudiyaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu dari karaa qolka fadhiga ee guri kasta ama gaar ...
Faransiiska Faransiiska Asalka ah: 100 Fikradaha Naqshadaha Farshaxanka
In kasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo nashqadeyn ah, gabdhaha casriga ah badiyaa waxay door bidaan astaamaha. Tani waa mid xaq ah, maxaa yeelay dilitaanka noocan oo kale ah wuxuu had iyo jeer noqon doonaa mid ku habboon, iyadoo aan loo eegin muuqaalka, dhacdo ama xilli ...
10 moodhadhka ugu richest Victoria 's Secret: sida ay u egyihiin iyo inta ay kasbatay?
Cinwaanka Angel Victoria ee Sirta - tanina waa ku dhowaad abaalmarinta Nobel ee adduunka moodeelada. Saldhigga sharafta leh, oo aadan ka saarin karin, sidaa darteed, sharaf in lagu sharfo in lagu sharfo oo keliya ...
Cadaadis flamingo: fikrado xiiso leh farshaxanka iyo sawirka 100
Xilliga xagaaga ayaa qeexaya qawaaniintooda moodada maalin walbana wuxuu ku darayaa midabyo cusub oo dhalaalaya naqshadeynta manicure fashion. Maanta, mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee farshaxanka ciddiyaha waa manicure ...
Saacadaha timaha leh ee timaha dhexdhexaadka ah: siyaabaha loo sameeyo qaabeynta
Markaad fulinayso wax kasta oo timaha u eg, dhererka timuhu door weyn bay leeyihiin. Ka dib oo dhan, ma aha dhammaan timaha timaha loo heli karo timo gaagaaban ama dheer. Sidaa darteed, timo-jarayaashu waxay tixgeliyaan midka ugu badan ee wax ku oolka ah ...
Manicure french white french - isku darka midabka, fikradaha naqshadeynta
Manicure Faransiis cad waa nooc dabacsan oo hawo leh qaabeynta marigolds, taas oo sinaba aan uga bixi doonin moodada. Muhiim ma ahan in lagu sameeyo manicure this cod cad….
Sida loo xiro haweenka buuxa ee xagaaga - sawirada sawirada ugu wanaagsan ee xilli-ciyaareedka
Mawduuca: Noocyada tirada dumarka
Wakiilka kasta ee nuska quruxda badan ee bini-aadamka wuxuu u qalmaa inuu noqdo mid aan loo dulqaadan karin oo aan lahayn meel muuqaal ah. Inbadan oo naga mid ah waxay caadaysteen heerar qaarkooda quruxda oo u dhaw data model, badanaana dhaca ...
Manicure oo leh qaab muuqda oo farta farta ah: 100 fikradaha sawirka
Gabar kasta, doorashada naqshadeynta cidiyaha wali waa tijaabo. Ka dib oo dhan, waxaa muhiim ah in aad isaga jeceshahay, u muuqato mid wanaagsan oo leh qaansooyinka maalinlaha ah oo aad ka turjunto niyadda, iyo sidoo kale aragtida quruxda. Ha ...
Sawirrada qolalka - Xulashada xulashada iyo 100 Sawirrada gudaha
Mawduuca: Naqshad qolka jiifka ah
Qolka jiifka - qol loogu talagalay nasashada iyo soo kabashada. Qaarkood waxay isku daraan maktabad, xafiis ama xitaa qol fadhiga. Waa muhiim inaad karti u yeelato inaad abuurto jawi raaxo iyo deganaansho….
Cadaadiska casriga ah ee casriga ah: isku dhafka ugu wanaagsan ee sawirada
Xiiqda cirridka, aragtida koowaad, waxay u ekaan kartaa caajis ama wax aan macquul ahayn, maxaa yeelay hooska cawlan ee lacquerku waa mid xasilloon oo aad u dhexdhexaad ah. Laakiin run ahaantii ma dhihi kartid xaalada mega ...
Bagretz iyo dahab: meesha ugu fiican ee Irina Shayk
Ka bixitaanka Irina Shayk rooga ee dhacdo kasta ayaa la sugayaa waxaana si kulul uga doodaya kumanaan taageerayaal ah iyo dhaleeceeyayaasha moodada. Aynu kahadalno waxa isbeddelada ah ee ku saabsan labisyada supermodel inta badan ...
Dhismaha casriga ah ee qolka laba qol ah - naqshad, qaabeyn
Iyada oo ay ugu wacan tahay isku-darka qiimaha aan fiicnayn iyo tirada mitirka laba-jibbaaran, waa aqal laba-qol ah oo ugu caansan suuqa guryaha maanta. Dhismooyinka cusub, aaggooda waxay gaari karaan 70-80 mitir murabac. m ...
Oval Manicure - 100 fikradaha ugu fiican ee sawirada
Manicure qurux badan waa qayb muhiim ka ah muuqaalka dumarka. Xaaladdan oo kale, ma aha oo kaliya naqshadeynta ciddiyaha, laakiin sidoo kale qaabkoodu waa muhiimad gaar ah. Sannadka 2019 wuxuu sii wadi doonaa isbeddellada dhammaan dabiiciga, markaa ...
Roodhaxyada ciddiyaha - naqshad sameynta xiiso leh iyo sawirro badan 100
Manicure soo jiidashadu ma aha oo keliya gacmo wanaagsan-quruxsan oo qurux badan, laakiin sidoo kale waa hab is-muujinta naag kasta. Thanks to xalka quruxda badan ee nalka naqshadeynta ciddiyaha ayaa go'aamin kara niyadda qof kasta oo fashionista ah. Gudaha ...
Manhajaha liinta - Naqshadaynta muuqaalka xagaaga ee dhalaalaya.
Haweenka casriga ah ee moodada, kuwaas oo raacaya isbeddelada hadda jira, waxay ogyihiin in 2019, midabka liinku uu yahay kaliya ugu sarreeya ee caanka ah. Waxaa loo isticmaalaa macno ahaan meelwalba, iyadoo laga bilaabayo dharka, qalabka iyo dhamaadka…
Timaha asalka ah ee timaha dhexdhexaad ah wajiga oval (sawirka 50)
Xirmooyinka timaha ee dhexdhexaadka ah ee wajiga oval oo leh kala duwanaansho kala duwan oo loogu talagalay gabdhaha yar yar iyo haweenka qaangaarka ah ayaa weli ku habboon xilli kasta sanadka iyo xaalad kasta. Wajiga oval ayaa loo arkaa kuwa ugu ...
Waxa la xidho dharka isku-dhafan - fikradaha 50 iyo sawirada sawirada
Mawduuca: Iyada oo la xidho
Su’aasha ah waxa la xidho dharka isku dhafka ah, ayaa dano badan leh. Ka dib oo dhan, dharka noocan ah ee kicinta badan ee sanadka 2019 mar labaad wuxuu noqdaa mid aad uxun. Nasiib wanaag, moodada casriga ah maahan ...
Nadiifinta nalka nalka 2019-2020: fikrado cusub oo sawir ah
Ciddiyaha dhalaalaya ee qaabab kala duwan oo kala duwan ayaa noqon doona isbeddelka ugu weyn ee 2019-2020 ee farshaxanka ciddiyaha. Cillada jilicsan, qurxinta iyo xarrago quruxsan ayaa si weyn caan ugu ah gabdhaha iyo ...
Sawir dharka jaalaha ah iyo waxa la xidho - Sawir 50
Ayaa u bixi doona dharka huruudda ah? Sawirada moodooyinka moodhalka ah waxaa lagu soo bandhigay bartayada internetka. Aynu isku dayno inaan ogaanno bal in wax caynkaas ah ay daruurigayaga daruuriga yihiin. Isbeddellada dharka ayaa soo jeedinaya ku laabashada dhaqankii hore ...
Farshaxanka madow - 2019 fikradaha sanadka ee sawirka
Markii la abuurayo muuqaal cusub qurux kasta, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo ma aha oo keliya qaabka dharka, laakiin sidoo kale qaabka saxda ah ee loo xushay manicure iyo pedicure. Waa inaad ogolaato in lugaha nimcada leh, ku labistaan ​​kabaha ...
Cadaadiska Shaxanka - 100 fikradaha ugu fiican sawirrada
Fashion weligeed ma taagna, sanad walbana waxaa jira noocyo cusub oo nashqadeysan oo ciddiyaha ah. Waqti aan fogayn waxaa jiray wiyil waaweyn, moobiillo iyo qaabab la taaban karo oo isbeddel ah. Markay tahay ...
Bacaha xeebta ee quruxda leh 2019
Aadista xeebta, waxaad qaadan kartaa ku dhawaad ​​boorso kasta ama waxaad ku dhex ridi kartaa shayga oo dhan, laakiin moodooyinka qaarkood oo boorsooyinka gacanta ah ayaa kufilan fasaxa xeebta waxayna gacan ka gaystaan ​​abuuritaanka xagaaga aan la xakamayn karin ...
Dumarka quruxda leh ee quruxda leh ee fasaxa xeebta
Ma tagaysaa badda dhexdeeda? Si kasta oo aad u qorsheyso fasaxaaga xagaaga, waxaad weli u baahan tahay inaad diyaarsato dharka xeebta. Ururinta xagaaga cusub ee naqshadeeyayaasha 2019 ayaa durba ...
Farshaxan cad oo qurux badan: isku dhafka ugu fiican, xulashada iyo sawirada 100
2019, qaabka faneedku waxyar baa iska beddelay. Tan waxaa ugu wacan soo bixitaanka farsamooyinka farshaxanka ciddiyaha cusub oo aad u xiiso badan. Ka dib oo dhan, gabar kasta waxay dooneysaa inay wax ka bedesho sawirradeeda waqtiga oo dhan, iyo wadajir ...
Naqshadeynta naqshadeynta xayawaanka - 100 fikradaha sawirrada sawirada
Inta ugu badan fashionistas waxay door bidaan inay sameeyaan farshaxanka ciddiyaha u gaarka ah. Jihadaani waxay leedahay waxyaabo qurux badan oo xiisa leh, oo ay ku jiraan silhouettes xayawaan. Sanad walba waxay u muuqataa ...
Naqshadda quruxda badan ee habka casaanka ee 2019 - fikradaha naqshadaha asaasiga ah ee asalka ah
Naag kasta iyo gabadh kastaaba waa inaysan waajib ku ahayn inay is daryeelaan. Muuqaalka haweeney kasta waa inay lahaataa timo wanaagsan oo qurux badan, manicure iyo, dabcan, barbaro leh. Waxyaabahan ...
Timaha haweenka ee timaha dhexdhexaad ah wajiga wajiga ayaa ah qaababka ugu wanaagsan ee qaabeynta.
Timaha loogu talagalay timaha dhexdhexaadka ah ee wajiga wareega ayaa si caqli gal ah u dheellitiraya muuqaalka qaab wareegsan. Waxa jira dhawr waxyaalood oo muhiim ah oo gacan ka geysan doona inay haweeney ka dhigato qurux qurux badan. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato, runtii ...
Kalluunkaan dalal kala duwan ayaa loogu yeeraa si ka duwan. Ka mid ah dadka ku hadla Af-Ingiriisiga, waxaa lagu yaqaanaa xardho qalin, iyo Shiinaha gudaheeda waxaa loogu magac daray ariga biyaha. Ha u maleynin nooca kalluunka tegi doona ...
1 2 ... 109 dheeraad ah
NUM 2018-2019 Confetissimo - barta haweenka